Methodszọ dị mfe iji rụkwaa ebe mmiri na-adịghị akwụ ụgwọ na usoro 5 dị mfe
Home / Foset Guide / Methodszọ dị mfe iji rụkwaa ebe mmiri na-adịghị akwụ ụgwọ na usoro 5 dị mfe
2020 / 10 / 12 nhazi ọkwaFoset Guide 1426 0
Philipp Mauerhofer / EyeEmFoto Getty
Ma ọ bụ na ọ bụ ihe kpatara eji esere mmiri n'okpuru ọdọ mmiri gị, ma ọ bụ ụda iwe na-asọ oyi nke na-ejide gị na mgbede, ọkpọkọ mmiri na-asọ oyi bụ nsogbu nke ga-abanye na njedebe zuru oke ma ọ bụrụ na ekwughị ya n'ụzọ ziri ezi. Ọ dabara nke ọma, ịkwụsị nkwụsị mmiri pọmpụ, n'ihi na ọkpọkọ mkpakọ na kichin gị, nwere ike ịbụ ihe ijuanya na ọ dị mfe ma dịkwa mfe.
Ngwaọrụ ị ga-achọ:
• Mgbanwe edozi; C spana
• Phillips na / ma ọ bụ flat-head screwdriver
• Mmanụ Penetrating, dị ka WD-40 ma ọ bụ CRC
• Dochie ndị na-ehichapụ washer na O-yiri mgbaaka
nzọụkwụ 1: Emela ka ọnụ ọgụgụ buru ibu kawanye njọ site na ịhazigharị pọmpụ gị mebiri emebi na Nke gara aga. Tupu ịmalite iji mmiri ma ọ bụ screwdriver na ihe ndozi gị, jide n'aka na mmiri gị na-enye agbanyụrịrị, site na njikwa ya na nsị ya na okpuru n'okpuru njikwa nke mmiri na-abata site na ụkpụrụ ụkpụrụ.
nzọụkwụ 2: Wepụ ihe ọ bụla ịchọ mma nke azụmahịa ahụ na knobs. A mfe prying na a ewepụghị-isi sikruuokwomoto ga-elekọta na. N'okpuru isi niile, enwere ike ịghasa nke ga - eme ka nkwekọrịta ahụ gaa na azuokokoosisi. Kpughee, jiri nwayọ wepụ azụmahịa gị na isi gị. Iji mmanụ na-abaghị uru nwere ike inyere aka n'ịtọhapụ ya, na-enye gị ohere iwepụ mgbata mmiri na mgbanaka.
nzọụkwụ 3: Jiri mkpịsị aka gị iji mee ka akụ dị mkpụ. Site ebe ahụ ọ kachasị mma ịchọpụta azuokokoosisi ahụ. Wepụ ya dị ka ihe dị irè. Na-adabere na mgbata, ụfọdụ ị ga-agbapụta nke ọma, ebe ndị ọzọ na-agbagọ na valvụ ahụ. Nyochaa ihe ndị ewepụrụ maka mmerụ ọ bụla.
nzọụkwụ 4: Ọ bụrụ na obere ihe adịghị emebi emebi na ọkwa a, nyochaa mgbanaka O-ring na washer dị na oche valvụ-ha nwere ike ịbụ nkọwa maka ihihi gị. Wepụ onye na-asacha ya ma tinye ihe ọzọ dị na oche ahụ.
Ọ dị mkpa iji nyochaa nza ndị ọzọ na O-yiri mgbaaka bụ ezigbo egwuregwu. Ọ bụrụ na ị maghị banyere ha abụọ, nwalee oche ahụ iji hụ ma nsọtụ ya na mpempe akwụkwọ cone ma ọ bụ nke dị larịị, ma zụta ụdị kwesịrị ekwesị. Ọ ga - ekwe omume ị ga - ewere mgbanaka O-gbanye na nke ụlọ ahịa ironmongery gị iji kwado nnwale kwesịrị ekwesị. Gị onwe gị kwa nwere ike ịzụta otu ùkwù na ọtụtụ nha dị iche iche nke O-yiri mgbaaka-ọ na-abụkarị ọnụ ahịa mgbakwunye abụọ.
nzọụkwụ 5: Si ebe a, fastidiously reassemble niile nke mmiri (ka nke washer / O-mgbanaka, azuokokoosisi, mbukota aku, ịghasa, na-emeso). Jiri nwayọ nwayọ gbanye eriri ahụ iji chọpụta mmiri na-arụ ọrụ wee nwalee iji hụ mgbe ị rachapụrụ nchapu ahụ.
Ọ bụrụ na, mgbe ị rụchara ọrụ gị niile, ị chọpụta na ọkpọkọ ahụ ka ga na-agbapụ, mgbe ahụ ihe na-akpalite pụkwara ịbụ nsị na oche oche gị. Ma ọ bụrụ na ehichaghị oge, ọ nwere ike mepụta nsị dị nso na nsị. Esemokwu dị iche iche nwere akà nká, akụrụngwa n'efu, ma ọ bụ, nke ka njọ, mmiri pọmpụ mebiri emebi. Ọ bụrụ na nchọpụta nsogbu gị na mpaghara ndị a, maọbụ ọ bụrụ na nsogbu dị iche iche na mberede na-eme, mgbe ahụ ọ nwere ike ịbụ oge ịkpọ aha plọmba maara ihe.
Ihe omuma a bu ihe nke ato mebere ma jigide ya site na ndi mmadu 3 zukọta, ma webata ya na ibe weebụ a iji nyere ndi ahia aka ibata adreesị ozi-e ha. Inwere ike ichota ihe ndi ozo banyere nke a na ihe omuma dika ya na piano.io
Nke gara aga :: Isi mmiri kachasị mma maka 2020 Osote: Na-anwa anwa zụta ụlọ ịsa ahụ na-asa ahụ maka ihe na-erughị $ 20?